Izinqaba: Esikhathini Esidlule Nanamuhla
Kusukela ezikhathini zasendulo, lezi zazakhiwa kanye nokwakhiwa, okuvumela ukuba bavikele idolobha, enqabeni ekuhlaseleni isitha. Ngokwesayensi lolu hlobo isakhiwo ibizwa ngokuthi izinqaba. sizikhumbula izifundo yomlando, ukukhokhela ngokukhethekile esakhiwe ezindaweni akude, isibonelo lasendulo, emagqumeni noma confluence imifula. Kamuva kwaba ethandwa sokwakha emhlabeni izinqaba nemizana izithiyo eyayenziwe wadala ngesimo izihlahla, emiseleni, izindonga zamatshe anolaka.
Njengoba imfundo baba amabutho anamandla kakhudlwana futhi ngenkuthalo ukuthuthukisa ubuciko nempi. Kusukela ngaleso sikhathi babe ibutho izinqaba aziwa ngayo, uma yamisa lonke oluqinisayo ensimini. Ngenxa efanayo izakhiwo ubunjiniyela steel iyashelela ukusebenzisa izikhali futhi nezempi, amabutho Isilawuli kwaya kuba lula, futhi uvikele ukuhlaselwa isitha babe eziqinile. izinqaba Modern kungaba zinhlobo ezilandelayo:
imisele, imisele, okuyinto zakhiwa for labadubuli;
observation umyalo okuthunyelwe ayadingeka ukuze bagcine yakho futhi isitha izikhundla niyale yempi;
zokukhosela umqhewu, bunkers, zokukhosela aklanyelwe ukuvikela kokubili izisebenzi kanye nezempi;
imisele zokuxhumana, ukuhlolwa igalari - lokhu igalari, okuyizinto komhlaba noma ngaphakathi kwezinye izakhiwo ngenhloso yokufihla umyalezo.
Izinqaba, ngakho-ke nandlela ukuvikela ibutho lakho, abantu kanye nempahla ekuhlaselweni isitha. Futhi ngaphambi inombolo yabo kwenezelwa izithiyo ahlukahlukene yokufakelwa ezifana okugqoma, scarps, Contrescarpe, ithangi izithiyo, okuyinto babebhekwa njengabangakufanelekeli izingxenye ezibalulekile izinqaba, izinqaba izinqaba. Kodwa ngesikhathi seMpi yoMhlaba yesiBili, izakhiwo eyayenziwe esakhiwe babebhekwa njengabangakufanelekeli ezimele izikhundla ebiyelweyo ngokuthi izithiyo-non-eziyiziqhumane. Konke lokhu kungenzeka ukuhlanganisa welithi "izinqaba elula", ngoba yakhiwe nje futhi ngokushesha.
Vula noma avaliwe design?
Kusukela umbono we nesakhiwo nezimpawu zokuhlela izakhiwo ezinjalo kungaba livuliwe noma livaliwe. Ngokwesibonelo, ukubandakanya igebe evulekile, imisele, emiseleni, engavamile zabo ukuthi izakhiwo esivikelayo yizona ifakwe ezindaweni ezihlukene, emnyango lapho edalulwa. Endaweni esivikelayo enjalo ukucashela amachashazi, igobolondo okuseceleni okubukhali nezimayini. Uthango uhlobo avaliwe kudalwa emhlabeni azungezwe, esinikela ukuvikeleka okungcono futhi ngezikhali ezivamile futhi phezu emikhulu, ezifana zenuzi.
Kusukela umbono izimo ukwakhiwa kanye izici nokusebenza izivikelo kungaba eside futhi insimu. Eyokuqala senziwa avame ngesikhathi sokuthula, futhi isikhathi eside: ukudala kubo usebenzisa ngezinto ezinamandla, aphethwe amanzi nogesi, njengoba endaweni ngezinye izikhathi ibutho uyisikhathi eside. Ngesikhathi sempi, ngokuvamile esakhiwe izinqaba ensimini, eyenziwe izinto etholakalayo ngakwesokunene (amatshe, tindvuku, ihlathi).
Namuhla kukhona imiklamo okuthuthukile womshini ngokhonkolo njalo nakakhulu zisetshenziswa, le steel mihlobiso, izindwangu zokwenziwa libhekene izakhiwo eliyingqayizivele zokuzivikela. Ngaphezu kwalokho, izakhiwo ezinjalo kungaba ithutheke kalula phezulu namabutho empi.
East Kazakhstan: ukufunda izici esifundeni
Lobachevskii Institute Nizhny Novgorod: amandla, ukubuyekezwa, kanye nekheli
Amandla Ivanovo State University. Ivanovo Energy University: amandla, ukudlula izinga
Isihloko ubudlelwane ngokomthethosisekelo-izincwadi ezingokomthetho zokuhlala Russian Federation
Demidov University Yaroslavl: incazelo, ikhethelo neminyango kanye nokubuyekeza
Iseluleko kubafundi: qala manje ukuhlela impilo yakho ngemva kokuthweswa iziqu
Art isitayela thina ukucula ingoma ethile. Fiato: izikhwama kubo bonke
Ukuminyana acinene ngaphandle rhinitis: zokwelapha
Kazan: "Golden Apple". Izizathu ukuthandwa
Turkey Coast Ezokungcebeleka futhi Amahhotela
Yini ukuthatha ukushaywa?
Yezitolo Ngempumelelo: ukonga eziphathekayo nge Promo amakhodi
Uzungu, incazelo, izindima abadlali of "Minds Criminal"
Yini isiphuzo walithanda Hemingway? Cocktail yomlobi enkulu
Kuyini agar, futhi ziyini?
Stylish izingubo wholesale zabesifazane kanye wholesale